Wasiir Beyle oo ka khudbeeyey shirka Carabta & Shiinaha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Beyle oo ka khudbeeyey shirka Carabta & Shiinaha
Beijing – Mareeg.com: Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga Dr. C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay shirkii 6-aad isku-imaatinka Carabta iyo Shiinaha oo gelinkii dambe ee shalay lagu soo gaba-gabeeyay magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha.
Furitaankii shirka Carabta & Shiinaha ayaa waxaa hadal ka jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Shacbiga Shinaha Xi Jinping, waxaana ka qeybgalay wasiirada arrimaha dibadda carabta, xoghayaha guud ee Ururka Jaamacada Carabta. Dr. Nabil Elarabi, ergo, diblomaasiyiin iyo mas’uuiyiin Carab iyo Shiineys ah oo tiradooda aheyd 200 ruux.
Wasiirka arrimaha debadda Soomaaliya, C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa khudbadiisa ku xusay fursadaha maalgashi ee dalka Soomaaliya ka banaan dhinacyada beeraha, kaluumeysiga, warshadaha, dalxiiska, iyo kheyraadka kale ee dihan ee dalku leeyahay, isagoo ka hadlay xaaladda ammaan iyo awoodda ciidamada qaranka, waxa uuna ka codsaday dowladda Shiinaha iyo wadamada Carabta taageero balaaran oo ku aadan la dagaalanka argagaxisada, dib u dhiska dalka, waddooyinka, garoomada diyaaradaha iyo dekadaha.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga ayaa sidoo kale khudbadiisa kaga hadlay dhibaatooyinka kooxaha argagaxisadu ay ka geysanayaan dunida carbeed oo Soomaaliya ay ka qeyb tahay, isagoo muujiyay baahida loo qabo tallaabo wadajir ah oo loo qaado ciribtirka argagaxisada iyo saboolnimada si loo helo deganaansho iyo horumar dhaqaale.
War-murtiyeed ka soo baxay shirka, ayaa lagu ammaanay dadaalada dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku xasilineyso dalka iyo horumarka ay ku talaabsatay muddooyinkii u dambeeyay , waxaana loogu baaqay beesha caalamka inay taageero muuqata u fidiyaan hey’adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya si guul dhameystiran looga gaaro arrimaha ammaanka iyo dib u dhiska dalka.
Shirka Madaxweynayaasha iyo hogaamiyaasha Carabta iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa inuu ku qabsoomo dalka Masar sanadka 2015.
Dhanka kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa kulamo gaar gaar ah la kala yeeshay Wasiirada Arrimaha Dibadda Qatar Dr. Khalid bin Mohamed Al-Attiyah iyo Sultanate Oman Yousef bin Alawi bin Abdullah, oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka, iskaashiga iyo arrimo kale oo ku qotama danaha wadaaga.
Wasiir Beyle waxa kale oo uu kulan gaar ah la yeeshay Xoghayaha guud ee Ururka Jaamacadda Carabta Dr. Nabil Elarabi oo ay isla faaqideen xaaladaha ammaanka iyo kaalinta Jaamacada Carabta ee fududeynta kaalmooyinka maaliyadeed, farsamo iyo bani’aadanimo oo Soomaaliya loogu tala-galay.
Wasiirka ayaa sheegay in Shiinuhu uu ka oggolaaday in Soomaaliya inuu ka qaybqaato dib u dhiska Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca jidadka iyo dekedaha.
Wasiirku waxa uu sheegay inay isla garteen dhiggiisa dalka Shiinaha in ay guddi ka shaqeeya arrintaasi ay labada dhinac u saaraan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga ayaa xoojisay siyaasadeeda dibadda, si indhaha caalamka ay ugu soo jiheyso isbadalada ammaan iyo hiigsiga barwaaqo ee shacabka Soomaaliyeed ay naawilayaan.